Rehefa zezika biolojika vita an-trano dia ilaina ny fandotoana fako biolojika.
Ny composting dia fomba mahomby sy ara-toekarena fanariana fako
Misy karazany telo ny karazana antontam-bato: mahitsy, antsasaky ny lavaka ary lavaka
Mety amin'ny hafanana avo, orana, hamandoana avo, faritra ambony latabatra amin'ny rano. Misafidiana toerana maina, misokatra ary akaiky loharano. Ny sakany apetaka amin'ny halavany 2m 1.5-2m halavany dia tantanana arakaraka ny habetsaky ny akora. Hamafiso ny tany alohan'ny hametrahana azy ary fonony amin'ny sosona ahitra na ahidrano ny sosona tsirairay mba hisitrihana ilay ranon-dranomasina .. 15-24cm ny hatevin'ny tsirairay. Ampio ny rano, sokay, fotaka, fotaka, sns, eo anelanelan'ny sosona mba hampihenana ny etona sy ny fihenan'ny amoniaka. Rehefa afaka iray volana ny zezika, mandroaka dumper mandeha mba hamadika ny zezika ary avadiho matetika ny antontam-bato mandra-pahalany rakitry ny farany. Ny habetsaky ny rano dia takiana arakaraka ny hamandoana na ny fahamainan'ny tany. Miovaova ny tahan'ny zezika amin'ny fizaran-taona, matetika 3-4 volana amin'ny fahavaratra 2 volana sy 3-4 volana amin'ny ririnina. .
Karazana antsasaky ny lavaka
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fiandohan'ny lohataona sy ny ririnina. Misafidiana toerana ambany mba handavaka lavaka lalina 2-3 metatra 5-6 metatra ny halavany ary 8-12 metatra ny halavany. Ny vavahady lakroa dia tokony hapetraka eo amin'ny farany ambany sy amin'ny rindrin'ny lavaka. Manampia mololo maina 1000 kg eo an-tampon'ny zezika ary asio tombo-kase amin'ny tany. Rehefa afaka herinandro iray ny zezika, miakatra ny mari-pana. Ampiasao ny dumper slotted, atodiho mandritra ny 5-7 andro ny réacteur de fermentation aorian'ny fitobiana, ary tohizo ny fikajiana mandra-pahalany ritra tanteraka ny akora.
Amin'ny ankapobeny 2 metatra ny halaliny, fantatra ihany koa amin'ny karazany ambanin'ny tany. Ny fomba fametahana dia mitovy amin'ny fomba antsasaky ny lavaka. Mampiasà dumper helix indroa mandritra ny famotehana mba hampifandraisina bebe kokoa amin'ny rivotra ilay fitaovana.
Ny fanaovana zezika anaerobika maripana ambony.
Ny fanaovana zezika amin'ny hafanana avo lenta dia fomba lehibe tsy mampidi-doza amin'ny fanariana fako biolojika, indrindra ny fako. Ireo zavatra manimba toy ny bakteria, atody ary masomboly ahitra ao anaty mololo sy excreta dia novonoina taorian'ny fitsaboana ny hafanana be. Ny fanaovana zezika anaerobika mari-pana avo lenta dia fomba 2, karazana antontam-bozaka ary karazana antsasaky ny lavaka. Ny teknikan'ny composting dia mitovy amin'ny an'ny compost mahazatra. Na izany aza, mba hanafainganana ny famotehana ny mololo, ny zezika amin'ny hafanana avo dia tokony hanisy bakteria lo ny hafanan'ny cellulose miakatra amin'ny hafanana, ary hametraka fitaovana fanamainana. Tokony horaisina ny fepetra fanamafisam-peo amin'ny faritra mangatsiaka. Ny composting amin'ny mari-pana avo lenta dia mandalo dingana maromaro: ny hafanana avo lenta amin'ny hafanana. Ireo akora manimba dia ho simba amin'ny hafanana ambony. Mety raha manana simenitra manokana na faritra fanaovana zezika ianao.
Mpiorina lehibe: azota.
Sub-singa: phosforus, potasioma, vy.
Ampiasaina indrindra amin'ny zezika azota, ambany fifantohana, tsy mora miteraka fahasimbana amin'ny rafitra faka. Tsy mety amin'ny fampiasana mavesatra mandritra ny vanim-potoana valin'ny voninkazo. Satria ny voninkazo sy ny voankazo dia mila phosoreo, potasioma, solifara betsaka.
Akora ilaina amin'ny zezika biolojika namboarina.
Manoro hevitra anao izahay hisafidy ireto sokajy manaraka ireto ho akora ilaina amin'ny zezika biolojika namboarina.
1. Mamboly akora
Any amin'ny tanàn-dehibe maro any Etazonia, dia mandoa vola ny mpiasa amin'ny fanangonana ravina mihintsana. Rehefa matotra ny zezika dia amidy amin'ny tantsaha amin'ny vidiny ambany. Raha tsy any amin'ny tany mafana izy io, dia tsara kokoa ny manao ravina mihintsana isaky ny 5-10 sm ny hateviny, ravina mihintsana amin'ny sosona amin'ny velaran'ny tany maherin'ny 40 sm. Ny elanelam-potoana misy eo amin'ireo ravina mihintsana dia mila hosaronan'ny olona maro toy ny tany, izay mety ~ mihinana 6 na 12 volana farafahakeliny. Ataovy mando foana ny tany fa aza atao be loatra ny rano mba hisorohana ny fahaverezan'ny otrikaina ao anaty.
Raha voankazo, voa, peel, voninkazo sns no ampiasaina, mety ho elaela ny fahalovana. Ny phosphore, potasioma ary solifara no avo kokoa.
Mofomamy tsaramaso, curd tsaramaso, sns
Miankina amin'ny toe-pahasalaman'ny degreasing, ny composting dia mila farafaharatsiny 3 ka hatramin'ny 6 volana vao masaka. Ny fomba tsara indrindra hanafainganana ny fahamatorana dia ny fanampiana mikraoba. Ny iray amin'ireo mason-tsivana hanaovana composting dia ny tsy fisian'ny fofona mihitsy. Ny votoatiny phosphore, potasiôma ary solifara dia avo noho ny ohatsaina maina, fa ambany noho ny zezika voankazo. Ny compost dia vita mivantana avy amin'ny vokatra soja na soja. Elaela vao lasa zezika ny soja satria be ny tavy ao anatiny. Ho an'ireo namana manao tavy biolojika dia mety mbola hanitra herintaona na taona manomboka izao. Noho izany, manolo-kevitra izahay ny masaka soja mba ho masaka tsara, hodorana ary hosoka avy eo. Izy io dia afaka mampihena be ny fotoana fiterahana.
Ny tain-kazo ahitra toy ny ondry sy omby dia mety amin'ny fanombohana sy famokarana zezika biolojika. Ankoatr'izay, avo ny zezika akoho sy zezika zezika zezika zana-boromailala, safidy tsara ihany koa.
Fanamarihana: Ny excreta biby izay tantanana sy haverina amin'ny zavamaniry mahazatra dia azo ampiasaina ho akora ilaina amin'ny zezika biolojika. Na izany aza, noho ny tsy fahampian'ny fitaovana fanodinana mandroso ao an-trano, dia tsy miaro ny fampiasana ny excreta olombelona ho toy ny akora hanaovana zezika organika izahay.
3. Ny tany mahavelona voajanahary voajanahary
Firaisana ara-nofo: azo volena, fa viscosity ambony. Tokony hatao zezika ifotony fa tsy irery.
Rehefa lehibe kokoa noho ny 10-20cm ny hatevin'ny voninkazo, ny fanjaitra kesika dia azo ampiasaina ho akora ho an'ny zezika biolojika. Na izany aza tsy azonao ampiasaina ny.
Ny hazo misy votoatiny ambany resina, toy ny firond volom-borona, dia misy vokany tsara kokoa.
Ny zezika dia mandaitra kokoa. Saingy, tsy azo ampiasaina mivantana izy io ary azo afangaro amin'ny akora organika hafa.
Ny antony tokony hamongorana tanteraka ny zavatra biolojika.
Ny fanimbana ny zavatra biolojika dia mitarika fiovana roa lehibe amin'ny alàlan'ny hetsika mikraoba: ny famafana ny zavatra biolojika dia mampitombo ny otrikaina mahomby amin'ny zezika. Etsy ankilany, ny zavatra biolojika amin'ny akora dia mihalefaka avy amin'ny sarotra ka hatramin'ny malefaka, ary ny endriny dia navadika ho tsy mitovy amin'ny fanamiana. Mandritra ny dingan'ny composting dia mamono voa, bakteria ary atody indrindra ny ahidratsy. Noho izany, mifanaraka kokoa amin'ny fepetra takian'ny famokarana fambolena izany.